चीन तातो बिक्री दुई पाङ्ग्रा 13 इन्च इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता र आपूर्तिकर्ता | हाइबा
तातो बिक्री दुई पाङ्ग्रा 13 इन्च इलेक्ट्रिक स्कूटर
न्यूनतम तौल ई-स्कुटरहरू यति लोकप्रिय हुनुको मुख्य कारणहरू मध्ये एक हो। धेरैई-स्कुटरकाममा जाने यात्रुहरू, उनीहरू आइपुग्दा कार्यालयमा लैजान्छन्। तिनीहरू साइकल जत्तिकै भारी र भारी छैनन् भन्ने तथ्य एक ठूलो फाइदा हो।
त्यसोभए, यदि तपाइँ एउटा किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ वरपर हेर्नुहुन्छ कि तपाइँका आवश्यकताहरू मिल्छ तर कम से कम तौल पनि।
विद्युतीय स्कुटरतिर लागेका केही साइकल मालिकहरूले ई-स्कुटरहरू फोल्ड गर्न मिल्ने र बोक्न सजिलो भएकाले त्यसो गरेको बताउँछन्। कम्तिमा तिनीहरूमध्ये धेरै छन्। यसलाई सजिलै संग तपाईं संग लगभग कहीं पनि लैजान सक्षम हुनु केहि मान्छे को लागी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। फोल्ड गर्न मिल्ने स्कूटरले साइकलको तुलनामा धेरै कम ठाउँ लिन्छ। यदि आवश्यक भएमा यसलाई कारको ट्रंकमा पनि राख्न सकिन्छ।
1 टुक्रा मूल्य: 2235 अमेरिकी डलर प्रति टुक्रा
फ्रेम: प्रबलित 6061 एल्युमिनियम मिश्र; ह्यान्डलबार: आयातित ग्यापलेस ह्यान्डलबार; ह्यान्डल ग्रिप: आयातित एलसीडी डिस्प्ले उपकरण; क्रूज नियन्त्रण; अगाडि र पछाडिको पाङ्ग्रा: 13 इन्च अफ-रोड वा रोड टायर; (ग्राहकको आवश्यकता अनुसार); दुई हेडलाइटहरू; रियर बत्ती र ब्रेक बत्ती; अगाडि र पछाडि टर्न सिग्नल एलईडी बत्ती; ब्रेक प्रणाली: अगाडि र पछाडि समायोजन तेल ब्रेक प्रणाली; ABS इलेक्ट्रिक ब्रेक; झटका अवशोषण प्रणाली: अगाडि र पछाडि तीन स्प्रिंग निलम्बन; रिमोटर नियन्त्रण एलईडी प्रकाश र एक्रिलिक प्यानल
इलेक्ट्रिक स्कूटर वजन सीमा
इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू राइड-सेयर कम्पनीहरूले लोकप्रिय बनाएका छन्, जसले तिनीहरूलाई तिनीहरूको फ्लीटको भागको रूपमा प्रस्ताव गर्दछ। राइड-सेयर इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको बढ्दो संख्याले आफ्नै व्यक्तिगत प्रयोगको लागि एउटा किन्न खोजिरहेको छ।
ई-स्कूटर खरिद गर्दा, पहिलो प्रश्नहरू मध्ये एउटा आउँछ जुन इलेक्ट्रिक स्कूटरको अधिकतम बोक्ने क्षमतासँग सम्बन्धित छ। यो किनभने धेरै मानिसहरू आवागमनको उद्देश्यका लागि एउटा किन्न खोजिरहेका छन्, तर तिनीहरू अझै पनि तिनीहरूलाई बच्चाहरूको खेलौनाको रूपमा हेर्छन्, जुन तिनीहरू होइनन्।
विद्युतीय स्कुटरको तौलको सीमा के हो?
मोडेलमा निर्भर गर्दै, इलेक्ट्रिक स्कूटरहरूको अधिकतम बोक्ने क्षमता 240 lbs (120 kg) देखि 570 lbs (260 kg) सम्म हुन्छ।
यदि तपाइँ ई-स्कूटर खरिद गर्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भने, तौल सीमा दिमागमा राख्नको लागि एक अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण विशेषता हो, तर यो एकमात्र निर्णायक कारक हुनु हुँदैन। जाहिर छ, यदि तपाईं ठूलो साइजको वयस्क हुनुहुन्छ भने, अधिकतम वजन क्षमता तपाईंले हेरिरहनु पर्ने चीज हुनेछ, किनभने ई-स्कूटरहरू निर्माताको सिफारिसहरू भन्दा बढी वजनको साथ कहिल्यै सवार हुनु हुँदैन।
म गलत हुन सक्छु, तर म भन्छु कि अधिकांश वयस्कहरूको तौल 310 पाउण्ड (150 kg) भन्दा कम हुन्छ। यदि यो मामला हो भने, त्यसपछि अधिकांश व्यक्तिहरूले बजारमा उपलब्ध स्कूटरहरूको बहुमत सवारी गर्न सक्षम हुनेछन्। बजारमा उपलब्ध सबै भन्दा शक्तिशाली र उच्चतम बोक्ने क्षमता भएको ई-स्कूटर किन पाउनु पर्ने केही कारणहरू मात्र छन्।
भारी शुल्क इलेक्ट्रिक स्कूटरहरूको लागि कुन भागहरू महत्त्वपूर्ण छन्?
विद्युतीय मोटर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण घटक हो। अतिरिक्त वजनको साथ पनि, यसले तपाईंलाई सार्न बनाउँछ। केही सबैभन्दा शक्तिशाली स्कूटरहरूमा अझ बढी शक्तिको लागि एक होइन, तर दुईवटा मोटरहरू छन्।
टायर। यो विशेष गरी उच्च-अन्त वजन-सीमा ई-स्कूटरहरूको लागि सत्य हो। चौडा भारी शुल्क टायर सामान्य हो। तिनीहरू ठोस रबर वा राम्रो गुणस्तरको वायमेटिक टायर हुन सक्छन्।
उच्च क्षमताको ब्याट्री। जति ठूलो मोटर, ब्याट्री त्यति नै शक्तिशाली हुनुपर्छ।
किन अधिकतम बोक्ने क्षमता महत्त्वपूर्ण छ?
कुनै पनि ई-स्कुटरले कति तौल बोक्न सक्छ भन्ने जान्न मानिसहरू चासो राख्छन्, किनभने धेरैजसो ई-स्कुटरहरू आवागमनका लागि प्रयोग गरिन्छ। स्कुटर चलाउँदा सवारहरूले ब्याकप्याक, स्कुल झोला आदि बोक्न सक्छन्। यदि तिनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सामानहरू साथमा बोक्न नसक्ने भए यो व्यावहारिक हुनेछैन।
अधिकतम बोक्ने क्षमता एक महत्त्वपूर्ण विशिष्टता हो। यो एक विशिष्ट संख्या (वजन) हो जुन कहिल्यै नाघ्नु हुँदैन। निर्माताको सिफारिसहरू पालना नगर्दा तपाईंको ई-स्कुटरलाई हानि हुन सक्छ।
ठूला र शक्तिशाली इलेक्ट्रिक स्कूटरका फाइदाहरू
विद्युतीय स्कुटरले बोक्न सक्ने कुल वजन धेरै हदसम्म विद्युतीय मोटरको शक्तिमा निर्भर हुन्छ। यस कारणका लागि, यदि तपाईं ठूलो वयस्क हुनुहुन्छ वा तपाईं ठूलो भार बोक्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले कम्तिमा एक भारी शुल्क ई-स्कूटर प्राप्त गर्न विचार गर्नुपर्छ।
उच्च तौल सीमा संग तपाईं अधिक वजन संग यात्रा गर्न सक्षम हुनुहुनेछ र स्तर भूभाग (जस्तै सहर सडकहरु) मा मात्र होइन। केहि सब भन्दा शक्तिशाली स्कूटरहरू अफ-रोड अवस्थाहरूमा वा उकालोमा जाँदा राम्रो हुनेछ।
भारी र शक्तिशाली इलेक्ट्रिक स्कूटर को कमजोरी
जब तपाइँ ई-स्कूटर किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ, "ठूलो र अधिक शक्तिशाली" आवश्यक रूपमा उत्तम विकल्प होइन।
सामान्यतया, विद्युतीय मोटरको पावर जति बढी हुन्छ, ई-स्कुटरले त्यति नै वजन बोक्न सक्छ। शक्तिशाली मोटरहरूले अधिक ऊर्जा खपत गर्छन् र परिणाम स्वरूप ठूला ब्याट्रीहरू चाहिन्छ। उच्च क्षमताको ब्याट्री र शक्तिशाली विद्युतीय मोटरले स्कुटरको कुल तौल बढाउनेछ। यसले प्रवेग, गति, दूरीको दायरा र समग्र ह्यान्डलिंगमा प्रभाव पार्नेछ।
धेरैजसो मानिसहरू आफ्नो ई-स्कूटरलाई सजिलो ढुवानीका लागि हल्का र फोल्ड गर्न मिल्ने भएको चाहन्छन्। दुर्भाग्यवश, उच्च अधिकतम बोक्ने क्षमता भएका धेरै भारी शुल्क ई-स्कूटरहरू हल्का तौल वा फोल्ड गर्न योग्य छैनन्।
शक्तिशाली, भारी शुल्क स्कूटर सामान्यतया अधिक लागत। कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण रूपमा बढी। यो एक शक्तिशाली इलेक्ट्रिक मोटर (वा मोटर्स), उच्च क्षमता ब्याट्री र अन्य कम महत्त्वपूर्ण घटक को लागत को कारण हो।
जान्नुहोस् किन इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू यति धेरै महँगो हुन्छन्।
उच्च बोक्ने क्षमता भएका ई-स्कुटरका उदाहरणहरू
15kw इलेक्ट्रिक स्कुटर
मोटर: 15000 वाट
दायरा: 110 माइल (158 किमी)
टायर: वायवीय (अगाडि), ठोस (पछाडि)
आरोहण: 25 डिग्री
अधिकतम लोड क्षमता: 265 lbs (120 kg)
वजन: 130 lbs (65 kg)
टिकाउ, राम्रो देखिने ई-स्कूटर। रंगहरूको छनोट: कालो,
सामान्य उपस्थिति शीर्ष निशान छैन, एक पुन: डिजाइन प्रयोग गर्न सक्छ।
अन्य सुविधाहरू विचार गर्न
न्यूनतम तौल ई-स्कुटरहरू यति लोकप्रिय हुनुको मुख्य कारणहरू मध्ये एक हो। धेरै ई-स्कूटर सवारहरू जो काममा यात्रा गर्छन्, उनीहरू आइपुग्दा कार्यालयमा लैजान्छन्। तिनीहरू साइकल जत्तिकै भारी र भारी छैनन् भन्ने तथ्य एक ठूलो फाइदा हो।
स्कूटरको कुल दायरा अर्को महत्त्वपूर्ण विशेषता हो, विशेष गरी यात्रुहरूका लागि। धेरै जसो बिजुली स्कूटरहरूको दायरा 16-40 माइल (24-65 किमी) हुन्छ, जुन पर्याप्त हुन्छ यदि तपाइँ यसलाई दैनिक चार्ज गर्न मन नमान्नु हुन्छ।
ध्यान दिनुहोस् कि त्यहाँ ई-स्कूटरहरू छन् जुन औसत भन्दा धेरै कम दूरीको दायरा छ। यो विशेष गरी अतिरिक्त उच्च बोक्ने क्षमता भएका भारी शुल्क स्कूटरहरूको लागि सत्य हुन सक्छ।
स्कूटरको अधिकतम दायरा बढाउने बारे थप जान्नुहोस्।
यो एक मुश्किल छ। कतिपय व्यक्तिहरूले वास्ता गर्दैनन् यदि उनीहरूले सवारी गरिरहेका ई-स्कूटर लोकप्रिय छन्। अरूको लागि यसले सम्झौता बनाउँछ वा तोड्छ। मेरो व्यक्तिगत विचार यो हो कि यदि तपाइँ तपाइँको स्कूटर परिमार्जन वा अपग्रेड गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाइँ केहि अधिक लोकप्रिय मोडेलहरू हेरिरहनु पर्छ। यसको मुख्य कारण हो कि स्पेयर पार्ट्स र कस्टम सेटहरू प्राप्त गर्न सजिलो र अपेक्षाकृत सस्तो हुनेछ। यदि तपाइँ कुनै परिमार्जन गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने, म भन्न चाहन्छु कि यो ठीक छ। यद्यपि, याद गर्नुहोस् कि स्कुटरहरू ब्रेक हुन्छन्, जस्तै कुनै पनि सवारी साधनहरू। यदि त्यसो भयो भने, तपाईं स्पेयर पार्ट्स अपेक्षाकृत सजिलै अर्डर गर्न सक्षम हुन चाहनुहुन्छ।
थप लोकप्रिय मोडेलहरूसँग तिनीहरूको प्रयोगको सन्दर्भमा अनलाइन उपलब्ध धेरै स्रोतहरू हुनेछन्। नियमित मर्मत र मर्मत, समस्या निवारण र सवारी सल्लाह जस्ता चीजहरू।
धेरै अन्य ग्याजेटहरू वा यातायातका मोडहरू जस्तै, त्यहाँ कुनै पनि उत्तम मोडेल छैन जुन सबै खरीददारहरूको आवश्यकताहरू फिट हुनेछ। सबैको फरक फरक अपेक्षा हुन्छ । म भन्न चाहन्छु कि त्यहाँ सबै ई-स्कूटर मोडेलहरूमा साझा गरिएको एउटा सुविधा छ, र त्यो हो: तिनीहरू रमाइलो छन्! यस बाहेक, तपाईंले आफ्नो आवश्यकताहरू हेर्नु पर्छ र आज बजारमा उपलब्ध मोडेलहरूको तपाईंको अनुसन्धानको आधारमा आफ्नै छनौट गर्नुपर्दछ।
स्कूटरले बोक्न सक्ने अधिकतम तौल एक अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण विनिर्देश हो, तर खरिद गर्दा यो मात्र निर्णायक कारक हुनु हुँदैन। धेरै सम्भावित सवारहरूका लागि, दुई-पाङ्ग्रेहरूको नयाँ सेटको लागि किनमेल गर्दा विचार गर्नुपर्ने अन्य महत्त्वपूर्ण सुविधाहरू छन्।
1. समुद्री ढुवानी:
-प्याकेज: बबल झोला + EPE फोम + भित्री बक्स + बाहिरी7तह नालीदार कार्टन
- एक दफ्ती को लागी एक टुक्रा
2. एक्सप्रेस / एयर डेलिभरी:
-बबल झोला + EPE फोम + भित्री बक्स + बाहिरी7तह नालीदार कार्टन + काठको फ्रेम समर्थन
-एक दफ्तीको लागि 1 टुक्रा, काठको फ्रेम समर्थन
3. रेल यातायात:
प्याकेज पनि ग्राहकको आवश्यकता अनुसार बनाउन सकिन्छ।
यदि तपाईंलाई विशेष प्याकेजिङ चाहिन्छ भने कृपया हामीलाई सूचित गर्नुहोस्।
के इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू माथि जान सक्छ?
यातायातको व्यावहारिक र भरपर्दो मोड मानिनको लागि, इलेक्ट्रिक स्कूटरहरू उकालो र डाउनहिल सहित विभिन्न प्रकारका भूभागहरूमा सवारी गर्न सक्षम हुनुपर्छ। त्यसो गर्दा, यो धेरै ऊर्जा खपत नगर्न डिजाइन गरिएको हुनुपर्छ, जसले यात्राको समग्र दायरालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा सीमित गर्नेछ। सौभाग्यवश, ई-स्कूटरहरू सवारहरूले चाहेको कुराहरू प्रदान गर्न पर्याप्त रूपमा सक्षम छन्।
सबै इलेक्ट्रिक स्कुटरहरू उकालोमा जान सक्छन्। धेरै मोडेलहरू कुनै पनि समस्या बिना 20-35% को inclines सवारी हुनेछ। Steeper inclines को लागि थप शक्तिशाली मोटर चाहिन्छ जुन केहि ई-स्कूटर मोडेलहरूमा फेला पार्न सकिन्छ।
त्यहाँ "मोटरको शक्ति" र "यात्राको दायरा" बीच राम्रो सन्तुलन छ। एउटा परम विद्युतीय स्कुटरमा विद्युतीय मोटर (वा केही अवस्थामा दुईवटा मोटर) द्वारा उपलब्ध गराइने पावरको सही मात्रा र एकल ब्याट्री चार्जमा यात्रा गर्न सक्ने दायरा हुन्छ।
ई-स्कूटर निर्माताहरूसँग तिनीहरूको सवारी साधन डिजाइन गर्दा केही कठिन विकल्पहरू छन्।
तिनीहरूले विचार गर्नुपर्ने सुविधाहरू मध्ये, निम्न तीन महत्त्वपूर्ण छन्:
धेरै शक्तिशाली विद्युतीय मोटरले ठाडो झुकावमा सवारी गर्न कुनै समस्या हुँदैन, तर यसले ब्याट्रीमा भण्डारण गरिएको ऊर्जाको ठूलो मात्रा खपत गर्नेछ। ठुलो बिजुली खपतले ब्याट्री चाँडै प्रयोग गर्नेछ, जसले स्कूटरको दायरा सीमित गर्नेछ
एक सुपर-बलियो ब्याट्रीले पावर-भोको इलेक्ट्रिक मोटरको लागि थप "रस" प्रदान गर्नेछ, तर यसको तौल र लागत धेरै बढी हुनेछ। अतिरिक्त वजनले स्कूटरले यात्रा गर्न सक्ने दायरा घटाउँछ। उच्च मूल्य ट्यागले उत्पादनको लोकप्रियतालाई सीमित गर्नेछ
स्कूटरले यात्रा गर्न सक्ने अधिकतम दायरा चार्जिङको आवश्यकतालाई कम गर्न पर्याप्त हुनुपर्दछ। मानिसहरू केवल एक उत्पादनमा रुचि राख्दैनन् जुन प्रत्येक दुई घण्टामा चार्ज गर्नुपर्छ। विद्युतीय स्कुटरको दायरा सकेसम्म उच्च होस् भन्ने उपभोक्ताहरू चाहन्छन्
यी समस्याहरूको कुनै सरल जवाफ छैन। त्यसै गरी, आज बजारमा कुनै पनि "उत्तम" इलेक्ट्रिक स्कुटर छैन। "उत्तम" शब्द दर्शकको नजरमा छ। यस कारणका लागि (र हाम्रो लागि भाग्यशाली, उपभोक्ताहरू), त्यहाँ धेरै ई-स्कूटर मोडेलहरू खरीदको लागि उपलब्ध छन्। थोरै अनुसन्धानको साथ, मानिसहरूले उनीहरूको व्यक्तिगत आवश्यकताहरू पूरा गर्ने स्कूटर प्राप्त गर्न सक्छन्। मेरो लागि सबै भन्दा राम्रो के हो, तपाईको आवश्यकताहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो नहुन सक्छ, र यसको विपरित। म केही ब्लग शीर्षकहरू देख्दा मुस्कुराउँछु: "सर्वश्रेष्ठ १० इलेक्ट्रिक स्कूटरहरू" वा "शीर्ष3ई-स्कूटरहरू", इत्यादि। त्यहाँ कुनै पनि "उत्तम" ई-स्कूटरहरू छैनन् जसले सबैको आवश्यकता पूरा गर्नेछ। यद्यपि त्यहाँ ई-स्कूटरहरू छन् जुन विशेष आवश्यकताहरूको लागि उत्तम छन्।
सौभाग्यवश, धेरैजसो ई-स्कूटरहरूले सहरका सडकहरू, फुटपाथहरू, बाइक लेनहरू, झुकावहरू र केही अफ-रोड ट्र्याकहरू समावेश गर्ने औसत भू-भागमा राम्रो सवारी गर्छन्।
माथि चढ्नका लागि सुझावहरू
तुलनात्मक रूपमा छोटो दूरीको झुकावहरूको लागि, तपाईंले केहि विशेष गर्न आवश्यक छैन। केवल सवारी जारी राख्नुहोस्, तर उकालोमा जाँदा नरोक्ने प्रयास गर्नुहोस्।
20% भन्दा ठुलो वा धेरै लामो भएका झुकावहरूका लागि, यसले इन्क्लाइनमा पुग्नु अघि नै छिटो र थप गति लिन मद्दत गर्न सक्छ। यसले तपाईंलाई छिट्टै शीर्षमा पुर्‍याउनेछ र तपाईंको ई-स्कूटरलाई पहाडको बीचमा रोक्नबाट रोक्न सक्छ। ध्यान राख्नुहोस् कि यो सिफारिस अत्यधिक परिवर्तनशील छ, किनभने त्यहाँ धेरै कारकहरू छन् जसले अन्ततः तपाईंको सवारीलाई असर गर्नेछ। यसमा तपाईंको विद्युतीय मोटरको शक्ति, ब्याट्रीको चार्ज अवस्था र विद्युतीय स्कुटरहरूले अगाडि बढाउनु पर्ने तपाईंको वजन समावेश गर्दछ।
यदि तपाईंको कम्युटमा धेरै उकालो सडकहरू छन् भने, तपाईंले अझ शक्तिशाली मोटर वा दुईवटा मोटरसहितको ई-स्कुटर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। केवल दिमागमा राख्नुहोस्, अधिक शक्तिशाली मोटर वा मोटरहरूले ब्याट्रीमा भण्डारण गरिएको धेरै ऊर्जा प्रयोग गर्नेछ। कम ऊर्जा भनेको छोटो दायरा हो।
उकालो चढ्नुको नतिजा
यदि तपाइँ प्रायः आफ्नो ई-स्कुटर माथि चढ्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँले पूर्ण चार्ज गरिएको ब्याट्रीबाट कम यात्रा दायरा पाउनु भएको हुनसक्छ। तपाइँ सामान्यतया एक झुकाव मा यात्रा गर्ने दूरी मा निर्भर गर्दछ, तपाइँको समग्र दायरा 20% वा चरम अवस्थामा 50% ले पनि कम हुन सक्छ।
इलेक्ट्रिक मोटर क्षति
इलेक्ट्रिक मोटरहरू पाङ्ग्राहरूमा केही गम्भीर शक्ति हस्तान्तरण गर्न सक्षम छन्। जे होस्, धेरै भागहरू जस्तै, लामो समयको लागि चरम कार्यभारको अधीनमा हुँदा तिनीहरू टुट्नेछन्।
के तपाईंले छोटो समयको लागि आफ्नो ई-स्कुटर चलाएर मोटर भएको पाङ्ग्रा छुन प्रयास गर्नुभएको छ? यो एकदम तातो छ। अब, एक मोटर जसले धेरै काम गर्नुपर्छ (उकालोमा जाँदा), ​​विमानको सतहमा जाँदा अझ बढी गर्मी उत्पन्न गर्नेछ। यो सबै अतिरिक्त गर्मीले मोटरको समग्र कार्यसम्पादन र जीवनकालमा नकारात्मक असर पार्छ। ढिलो होस् वा चाँडो यो सजिलै बिग्रन सक्छ, तपाईलाई मोटर बदल्न वा पूर्ण रूपमा नयाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर लिन बाध्य पार्छ। दायरा कसरी विस्तार गर्ने?
पहिलो र प्रमुख, तौलको मात्रा सीमित गर्नुहोस् जुन तपाईं आफ्नो इलेक्ट्रिक स्कूटरमा सवारी गर्न चाहानुहुन्छ।
दोस्रो, धेरै छिटो नजानुहोस् र आफ्नो गति स्थिर राख्न प्रयास गर्नुहोस् (अनावश्यक प्रवेगहरू सीमित गर्नुहोस्)।
तेस्रो, निर्माताले सिफारिस गरे अनुसार टायरको चाप राख्नुहोस्।
चौथो, निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंको ब्रेकहरू राम्रोसँग समायोजित छन्। ठीकसँग मर्मत नगरिएका ब्रेकहरू अन्ततः आंशिक रूपमा संलग्न हुन सक्छन् र इलेक्ट्रिक मोटरलाई कडा काम गर्न सक्छन्। यो व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट महत्त्वपूर्ण छ, किनकि तपाईंले ब्रेकहरू रगडेको पनि सुन्न सक्नुहुन्न।
पाँचौं, सम्भव भएसम्म, तपाईंले यात्रा गर्ने झुकावहरूको संख्या सीमित गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। सामान्यतया, ढिलो र लामो झुकाव हुन्छ, यसले तपाईलाई ई-स्कूटरको कुल दायरामा बढी नकारात्मक प्रभाव पार्छ।
त्यहाँ धेरै परिमार्जनहरू छन् जुन तपाईंले आफ्नो दायरा बढाउन सक्नुहुन्छ। केहि अरु भन्दा राम्रो छन्। केहिमा तपाईको सवारी शैली परिमार्जन मात्र समावेश छ, जबकि अन्यमा तपाईको इलेक्ट्रिक स्कूटरको भौतिक परिमार्जनहरू समावेश छन्।
तपाईंको इलेक्ट्रिक स्कूटरको दायरा विस्तार गर्ने बारे थप पढ्नुहोस्।
तपाईंको आफ्नै व्यक्तिगत आवश्यकताहरूको लागि उत्तम इलेक्ट्रिक स्कूटर कुन हो भन्ने निर्णय गर्दा, तपाईंले भर्खरै उल्लेख गरेका कुराहरूलाई विचार गर्नुपर्छ। त्यहाँ कुनै पनि उत्कृष्ट ई-स्कूटर छैन, बरु त्यहाँ एक हुन सक्छ जुन तपाइँको व्यक्तिगत आवश्यकताहरु लाई सबै भन्दा राम्रो मिल्छ।
यी केही बिन्दुहरू सम्झनुहोस्:
तौल - तपाईको इलेक्ट्रिक स्कूटर जति हल्का हुन्छ, तपाई उति छिटो र अगाडि बढ्नुहुनेछ। अतिरिक्त ब्याट्री, डुअल इलेक्ट्रिक मोटर वा तपाईले बोक्नुभएको भारी ब्याकप्याक जस्ता चीजहरूले स्कूटरले बोक्नुपर्ने तौल बढाउनेछ र यात्राको छोटो दायराको परिणाम हुनेछ।
दूरी - यदि तपाइँ विद्यालय वा काममा तपाइँको ई-स्कुटर चढ्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाइँ प्रत्येक दिन यात्रा गर्न आवश्यक पर्ने दूरी पत्ता लगाउनुहोस्। अधिकांश मानिसहरूको कम्युट प्रत्येक दिन १०० माइलभन्दा लामो हुँदैन, जसको अर्थ आज बजारमा रहेका अधिकांश ई-स्कूटरहरू पर्याप्त हुनेछन्।
भू-भाग - तपाईंले प्रत्येक दिन यात्रा गर्नुहुने दूरी अनुमान गर्दा, तपाईंले कुनै पनि लामो अफ-रोड यात्राले तपाईंको ब्याट्री छिटो खेर जानेछ र तपाईंको स्कूटरको दायरा घटाउनेछ भन्ने तथ्यलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ।
गति - तपाईं जति छिटो जानुहुन्छ, बिजुलीको मोटरले काम गर्न गाह्रो हुन्छ। यस कारणको लागि, अधिकतम वा नजिकको अधिकतम गतिमा सवारी गर्दा तपाईंको यात्राको दायरा पनि घट्नेछ। सौभाग्य देखि, आफ्नो यात्रा को दायरा विस्तार गर्न को लागी, तपाईले गर्नु पर्ने भनेको औसत गतिमा सवारी गर्नु हो र धेरै पटक गति नगर्ने प्रयास गर्नुहोस्। निरन्तर गति राख्नु यहाँ कुञ्जी हो।
अघिल्लो: 20000w 13 इन्च उच्च शक्ति नेतृत्व प्रकाश अभियान इलेक्ट्रिक स्कूटर
अर्को: hotsales trotinette electrique इलेक्ट्रिक स्कूटर
इलेक्ट्रिक स्कूटर 72v, चिनियाँ इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक स्कूटर
90 माइल प्रतिघण्टा वयस्क विद्युतीय स्कुटर 10000w/15000w को लागि...
84v फोल्डिंग इलेक्ट्रिक साइकल 15000w इलेक्ट्रिक sc...
Monopattino elettrico वयस्क 72v 15000w इलेक्ट्रिक...
15000w 85 mph छिटो सस्तो उत्तम इलेक्ट्रिक स्कुटर ...
84v छिटो 20000w 13 इन्च इलेक्ट्रिक स्कूटर ebike f...
उत्पादन मूल्य 15000w दुई पाङ्ग्रे फोल्डेबल ele...